Nin xaaskiisa ka jaray labada dhagood – Murtimaal
Nin xaaskiisa ka jaray labada dhagood
02/02/2017 Video News NEWS
Subxan Allah nin xaaskiiska ka jaray labada dhagood. Haweeney 23 sano jir ah oo u dhalatay dalka Afqaanistaan ayaa BBC-da u sheegtay in seygeeda uu xidhxidhay oo uu ka jaray labada dhagood kaddib muran ku saabsan arrimaha qoyska.
Booliska dalkaasi ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ninka falkan geystay uu u cararay dhanka degmada Kashinda oo uu hadda ku dhuumaaleysanayo. Zarina ayaa warbaahinta Pajhwor u sheegtay in ninkeeda uu hurdo ka soo kacay oo uu dhibkaasi u gaystay iyada oo aysan dhicin wax muran ah oo dhex maray, waxa ayna BBC-da u sheegtay muddo dheer uu aad u xumaa xiriirka iyaga iyo ninkeeda.
Previous Post:Gabaryahay ninkaaga xalaasha ah dhunko
Next Post:Daawo Sawirada Naciim designs oo dadka dareenkooda kiciyey iyo wadaado ka muujiyey walaac